Umfundi weRoma uClaudius Ptolemaeus (uPtolemy) -Jografi
Umfundi wamaRoma uKlaudius Ptolemaeus
Akukho nto eyaziwayo ngobomi bomfundi weRoma uKlaudiyo uPtolemaeus owaziwa ngokuba yiPtolemy . Nangona kunjalo, kucingelwa ukuba wayephila ukusuka malunga ne-90 ukuya ku-170 CE kwaye wasebenza elayibrari yase-Aleksandriya ukusuka kwi-127 ukuya kwi-150.
Iingcamango zikaPtolemy kunye neeScholarly Works kwiJografi
I-Ptolemy yaziwa ngenxa yezenzo zakhe ezintathu zemfundo: i- Almagest - ejolise kwi-astronomy ne-geometry, i- Tetrabiblos - ejolise kwiinkwenkwezi, kwaye, ngokubaluleke kakhulu, iJografi - eyona yolwazi oluqhubekela phambili.
IJografi yayinemiqulu eyisibhozo. Ookuqala uxoxe ngeengxaki zokumela umhlaba ojikelezayo kwiphepha eliplani (khumbula, abaphengululi bamaGrike nabaseRoma babesazi ukuba umhlaba ujikeleze) kwaye unika ulwazi malunga nemaphu yeemaphu. Iyesibini ngemiqulu yesixhenxe yomsebenzi yayiyi-gazetteer yeentlobo, njengengqokelela yee-8 kwiindawo ezijikeleze ihlabathi. Le gaseta yayimangalisa ukuba iPtolemy yakha ulungelelaniso nobude - wayengowokuqala ukubeka inkqubo yegridi kwimephu kwaye isebenzise inkqubo efanayo yegrid kwiplanethi yonke. Uqoqo lwakhe lwamagama eendawo kunye neendlela zokudibanisa zibonisa ulwazi lwendawo yokubukumkani baseRoma kwinkulungwane yesibini.
Umthamo wokugqibela weJografi wawuyi-atlas kaPtolemy, equkethe imephu esetyenzisiweyo kwiprogram yakhe kunye neemephu ezibekwe ngasenyakatho phezulu kwemephu, iindibano zeempapasho ezenziwe nguPtolemy. Ngelishwa, i-gazetteer kunye neemephu ziqulethe ezininzi iinkolelo ngenxa yokuba i-Ptolemy yanyanzeliswa ukuba ixhomekeke kwiingqikelelo ezihamba phambili zabahambi beentengiso (ababenako ukulinganisa ngokuchanekileyo ubude ngelo xesha).
Njengolwazi oluninzi lwexesha elidlulileyo, umsebenzi oyikekayo kaPtolemy waphulukana iminyaka engaphezu kwewaka emva kokupapashwa kokuqala. Ekugqibeleni, ekuqaleni kwekhulu leshumi elinesihlanu, umsebenzi wakhe wafunyanwa waza waguqulelwa kwisiLatini, ulwimi lwabantu abafundiswayo. IJografi yafumana ukugqithisa ngokukhawuleza kwaye kwakuneenguqu ezingaphezu kwezine eziprintwe ukususela kwishumi elinesihlanu ukuya kweleshumi elinesibhozo.
Kwiminyaka yeminyaka, abadumi beemifanekiso zecala abaphakathi kweminyaka ephakathi baprintela iintlobo ezahlukeneyo zegama elithi Ptolemy kubo, ukubonelela ngeenkcukacha zabo kwiincwadi.
UPtolemy wayetyala ngokungathandabuzekiyo kwinqanaba elifutshane lomhlaba, olwaphelisa uChristopher Columbus ukuba afikelele eAsia ngokusuka entshonalanga eYurophu. Ukongezelela, uPtolemy wabonisa uLwandle lwamaNdiya njengolwandle olukhulu lwangaphakathi, olunxweme ngasemzantsi yiTerra Incognita (umhlaba ongaziwa). Ingcamango yelizwekazi elikhulu elikumzantsi lazisa iindwendwe ezininzi.
IJografi yayinempembelelo enzulu ekuqondeni kwendawo ye-Renaissance kwaye yayinelungelo lokuba ulwazi lwayo luphinde lwafunyanwa ukuze luncede ukusekwa kweengcamango zendawo esiza kuba nazo namhlanje.
(Qaphela ukuba umphandi uPtolemy akafani noPtolemy owayelawula iYiputa waza waphila ngo-372-283 BCE. UPtolemy yayingumntu oqhelekileyo.)
Iimodeli zeClay Recipes
Iglosari yokuSebenza: I-Waive ne-Wave
Inqanaba lokuQeqesha koBomi kunye noKhuseleko: inhlanganisela enamandla
UKumkani Henry IV waseNgilani
Izidingo zeeKholeji zeeKholeji zeReed
Top 10 Calvin Harris Iingoma
I-Kentucky Vital Records - Ukuzalwa, Ukufa kunye neMitshato
I-PGA Tour: iMargin of Victory enkulu